Loza Mandindona Ny Amazona Ilay Volavolan-dalàna Vaovao Momba Ny Voly Fary Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 9:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Italiano, Français, Português
Volavolan-dalàna Federaly laharana faha 626/2011 [pt], izay neken'ny Antenimiera Federaly Breziliana ny 15 May 2013, no nanome alalana ny voly fary eny amin'ny faritra antsoina hoe Amazônia Legal, izay araky ny tao-tsaritany dia ahitàna ny faritry ny alan'i Amazona, ny Cerrado faritra tropikaly rakotra bozaka avo, ary ny tany honahona ao Pantanal.
Velom-panahiana amin'ny mety ho voka-dratsy haterak'io fambolena fary io eny amin'ny faritry ny ala mbola misy hazo maniry ihany ireo manam-pahaizana manokana sy ireo mafana fo na dia eo aza ny fameran'ilay lalàna ny fambolena ho eo amin'ny faritr'ala efa voatapaka sy ny 20 isan-jaton'ny tany eny ambanivohitra [pt].
Nanamafy ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanana Tsy miankina WWF-Brasil [pt] fa tsy misy tombontsoa ho an'ny faritra izany, na ara-toekarena na ara-tontolo iainana. Vinavinain'ireo manam-pahaizana fa hanankorontana ny firindran'ny tontolo iainana sy ny zava-manan'aina io voly fary tokana io [pt] ary hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiveloman'ireo mponina teo hatrizay sy mpitàna ny nentin-drazana, ary hampivelatra ny fambolena fary ho any amin'ny faritra hafa amin'ny alan'i Amazona .
Nanao fanadihadiana lalina i João Humberto Camelin, ilay mpahay tao-tsaritany avy ao amin'ny Oniversitem-panjakan'i Brezila ao Campinas tao anatin'ilay tafatafa niarahana taminy ao amin'ny vohikala Instituto Humanitas Unisinos [pt] :
Neken'ny Antienimieran-doholona ilay volavolan-dalàna 626/2011 ho “manana endrika famonoan'olona”, izay midika fa ny Kaomisiona ny Tontolo iainana ihany no nifidy ilay lalàna. Tsy nisy ny fifidianana ampahibemaso tao amin'ny Antenimieran-doholona fa avy hatrany ilay lalàna dia nalefa tany amin'ny sampana mpanao lalàna sy ny Prezidansa .
Ary dia maro ireo velon-tebiteby hoe tsy hijanona aminà fambolena fary ihany io. Ilay mpahay siansa miompana amin'ny ala, Paulo Barreto avy ao amin'ny Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Sampam-pianarana momba ny Olona sy ny Tontolo Iainana ao Amazona, IMAZON), dia matoky[pt] fa mety misy tsindry ara-toekarena ho amin'ny famokarana “ethanol” anaty fotoana maharitra ihany ao :
Araky ny antotan'isa [pt] azo avy amin'ny Reuters, ny volana May 2013, nanondrana “ethanol” 139.8 tapitrisa litatra i Brezila, fiakarana 36.6 isan-jato raha oharina tamin'ny 102.3 tapitrisa litatra naondrana ny volana Aprily tamin'io taona io ihany. Ny fidiran'ny vola avy amin'ny fivarotana io solika io dia niakatra ho 93.9 tapitrisa dolara Amerikana ny volana May, nahitàna fiakarany 30.6 isan-jato raha oharina ny tamin'ny volana Aprily izay 71.9 tapitrisa dolara Amerikana. Na dia izany aza, nahitàna fidinana ihany teo amin'ny habetsahany sy ny lanjan'ny vola raha oharina tamin'ny vanim-potoana toa izao tamin'ny taon-dasa.
Tao amin'ny Twitter, nanakiana ny fanapahan-kevitry ny Antienimieran-doholona ihany koa ireo manam-pahaizana manokana momba ny tontolo iainana. Ilay mpahay taon-tsaritany Gustavo (@Guveronesi) dia nandefa bitsika toa izao :
Naneho ny heviny i Marina Silva (‏@silva_marina),ilay Loholona teo aloha :
Nanamafy ilay mpanoratra Frei Betto (@freibetto) hoe :
Manao izay hanairana ny sain'ny fiarahamonina ilay fanentanana anaty aterineto miady amin'ny fanapahana ala ao Amazona. Natsangan'ilay vondona Action B. Brasil, nahangona sonia efa mihoatra ny 126 000 ilay fanentanana hanoherana ny fambolena fary irery ihany [pt]. Ny fanentanana lehibe indrindra amin'izany fiarovana ny lova voajanahary izany dia ny “Salve a Amazônia!” [pt] (Vonjeo ny Amazona!), izay efa nahatratra 2.2 tapitrisa ny sonia voahangony.